DHAGAYSO:Camay oo tacsi u diray Qoyskii & Qaraabadii uu ka baxay Cabdirashiid Maxamed Xirsi Iyo Safiirnimadiisa oo uu ka hadlay – DMS
HomeWararkaDHAGAYSO:Camay oo tacsi u diray Qoyskii & Qaraabadii uu ka baxay Cabdirashiid Maxamed Xirsi Iyo Safiirnimadiisa oo uu ka hadlay
DHAGAYSO:Camay oo tacsi u diray Qoyskii & Qaraabadii uu ka baxay Cabdirashiid Maxamed Xirsi Iyo Safiirnimadiisa oo uu ka hadlay
20th April 2019 editor
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland Eng. Cabdixakiin Xaaji Cumar Camay ayaa ka tacsiyeeyey geeridii ku timid alle ha u naxariistee Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo xilal kala duwan kasoo qabtay Puntland isla markaasna muddo 15 sano ah xildhibaan kasoo noqday Baarlamaanka Puntland sidoo kalena mar gudoomiye kasoo noqday.
Mr. Camay ayaa alle uga baryey in uu naxariistiisa jano ka waraabiyo marxuumka oo saaka ku geeriyooday gudaha magaalada Garowe uuna samir iyo iimaan ka siiyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuunka.
Madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland Eng. Cabdixakiin Xaaji Cumar Camay oo ay soo wada shaqeeyeen alle ha u naxariistee Cabdirashiid Maxamed Xirsi xukuumaddii madaxweyne Gaas oo uu kasoo noqday wasiirka wasaaradda Kalluumaysiga iyo wasiirka wasaaradda hawlaha guud ayaa sheegay in uu ku yaqaan sifo wanaagsan isla mar kaasna uu ahaa marxuunku shakhsi wax badan u qabtay shacabka Puntland.
HALKAN HOOSE KA DHAGAYSO CODKA CAMAY
Camay oo wax laga waydiiyey magacaabistiisa safiirka dowladda Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in magacaabistiisa uun ay haatan noqoto uuna ka shaqayn doono is badal wacan oo xiriir oo dhex mara labada dal.
DHAGAYSO:Xildhibaanada Barlamaanka Puntland oo ka tacsiyeeyey geeridii ku timid AUN Cabdirashiid Maxamed Xirsi
SAWIRO:Shir diirada lagu saarayey dhamaystirka Dastuurka dalka oo Muqdisho ka dhacay